उत्तम बीचमा छालहरूका लागि शीर्ष रेटेड कर्लिंग इरनहरू - सुन्दरता
शीर्ष-रेटेड कर्लिंग इरनहरू जसले उत्तम समुद्री तरंगहरू बनाउँछ
Top Rated Curling Irons That Make Perfect Beachy Waves
सहज देखिको सूची जुन वास्तवमा कत्ति गाह्रो हुन्छ क्रिमिनल लामो छ। (तपाईं हेर, कुनै मेकअप मेकअप।) चार्ट सबैभन्दा माथि छ कि एक? समुद्री किनारका छालहरू। यस्तो शैलीको लागि जुन सागरमा पौडेर स्वाभाविक रूपमा देखा पर्दछ, यसले निश्चित रूपमा धेरै सीप र टेक्चरराइजिंग उत्पादनहरू लिन्छ यसलाई यसलाई तान्नका लागि। प्रक्रिया अन-जटिल बनाउन मद्दतको लागि, हामीले हाम्रो स्रोतहरू पोलग्यौं र इन्टरनेट भरिका समीक्षाहरूमा पढ्दछौं जुन कर्लिंग इरनहरू सुन्दर बफ्सले कसम खानु हुन्छ। यहाँ प्रत्येक केश प्रकारका लागि उत्तम हो।
जिद्दी स्ट्रेट कपालको लागि उत्तम
तपाईको कपाललाई केवल कम्तिमा सीधा फेला पार्नको लागि केवल एक घण्टा भन्दा कम पछि कर्लिंग गर्दै हुनुहुन्छ? सबैभन्दा खराब। सीधा कपालका लागि जुन भर्खरै छोड्दैन, यो सुपर-तातो उपकरण टिकट हो। समीक्षकहरूले शपथ लिन्छन् कि यसले उनीहरूको एन्ड्यान्डेबल लकहरू पूर्ण १२ घण्टासम्म अवरुद्ध राख्दछ - एक जनाले भन्यो कि यो लामो समय सम्म चल्योशनिबारलाईबुधवार।
ड्राईबार ($ १55)
उत्तम कपाल को लागी उत्तम
पातलो कपाल भएकाहरूका लागि पूर्ण घन्टीको क्षेत्र नबनाईकन त्यो कर्ल लिन कठिन हुन सक्छ। लगभग five ताराहरूमा, प्रायः समीक्षकहरूले टिप्पणी गरे कि यस उपकरणको बाक्लो ब्यारेलले उनीहरूलाई तृष्णा भइरहेको नरम लहरलाई पुर्‍यायो।
GHD ($ १ $$)
सबै भन्दा राम्रो श्याम्पू ठीक कपाल
स्ट्रेटिingनिंग * र * कर्लि .को लागि उत्तम
केवल एक उपकरणको लागि कोठा छ? यो दुई-इन-एक ग्याजेट दुबै सीधा र कर्लि। दुबैको लागि काम गर्दछ, नरम कम्पनको लागि धन्यवाद जुन यसले तपाईंको कपालमा समात्न मद्दत गर्दैन। कुनै गांठ, कुनै दफन, कुनै गडबड छैन।
बायो आयनिक ($ २0०)
नो-असफल कर्लहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ
उनीहरूले नोटि forको लागि बीचवेवर नामको प्रतिलिपि अधिकार गरेनन् '। यो पुरस्कार-विजेता रन्ड बिस्तारै घुमाउँदछ त्यसैले चरम नौसिखिए पनि ती लोभनीय छालहरू पाउन सक्दछ।
बीचवाला कम्पनी ($ १ $$)
आँखा झिम्का अन्तर्गत घरेलु उपचार
विभिन्न प्रकारका कर्लहरूको लागि उत्तम
ब्यारेल कर्लको लागि यो उत्तम छ। तर ती दिनहरूको लागि जब तपाईं एक फ्याक्स ब्लाउउट वा टाईट रि ringलेट्स कोसिस गर्न चाहानुहुन्छ, यो सबै इन-वन उपकरणले तपाईंलाई ती पखेटा पनि मद्दत गर्दछ।
T3 ($ २0०)
बाक्लो कपालका लागि उत्तम
यसको बहु गर्मी सेटिंग्स र विस्तृत ब्यारेलको साथ, सबै प्रकारका समीक्षकहरूले यो फलामको कसम खान्छन्। जहाँसम्म, यो कसरी अविश्वसनीय तातो हुन्छ को कारण, बाक्लो कपाल संग ती विशेष गरी यसको प्रभावकारिता उल्लेख गरे। (हामी सुझाव दिन सक्छौं सुरक्षात्मक पन्जा ?)
तातो उपकरणहरू ($ )०)
भोल्यूमका लागि उत्तम
यदि समुद्र किनारका तरंगहरूको तपाइँको मनपर्दो संस्करण सागर पोस्ट पश्चात भन्दा अधिक भिक्टोरियाको सीक्रेट एन्जिल हो भने, यो अंडाकार भांडा - परम्परागत सर्कलको विपरीत, जीवन भन्दा बमबेल तरंगहरू दिन योग्य छ।
बजेटको लागि उत्तम
एक बजेट मा stylin छन् जो को लागी एक लगातार पांच सितारा विजेता। समीक्षकहरूले यसको विश्वसनीयता र स्वत: टर्नफ क्षमताहरू मन पराउँछन्।
Conair ($ २०)
गर्मीबाट बचाउनका लागि उत्तम
बेड बाथ र पछाडिको दुई सय बाईस समीक्षकहरू यस शीतल स्ट्रेटिingनिंग कर्लिंग संकरको कसम खान्छन्। तर वास्तविक किकर नवीन बुनेको सिरेमिक प्लेटहरू हुन् जसले तपाईंको कपाललाई फलामको वास्तविकतामा स्पर्श गर्नबाट रोक्दछ। यो गर्मी क्षतिको 92 २ प्रतिशत रोक्नको लागि प्रमाणित छ। अधिक तपाईंलाई थाहा छ।
Instyler ($ ११))
व्यस्त बिहानको लागि उत्तम
समीक्षकहरू यस उपकरणको साथ व्याकुल छन् जुन एकै वेगमा चाल सुक्खा र स्टाइल गर्न सक्दछ, बिहानको दिनचर्यालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा काट्छ।
मित्र ($ १००)
शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ
सम्भाव्यता तपाईले यसलाई आफ्नै बनाउन सक्नुहुन्न। तर पाँच-तारा समीक्षा चम्किरहेको साथ, घरका स्टाइलिस्टहरू यो कत्तिको सजिलोसँग व्याकुल हुन्छन्, यसले शुरुआतीहरूको लागि ब्रेक नराख्ने बनाउँदछ (विशेष गरी यो $ २० भन्दा कमको हुँदा)। तपाईं यसलाई केवल कपालमा क्ल्याम्प गर्नुहोस्, दस सेकेन्डको लागि समात्नुहोस् र समान छालहरूको लागि छोड्नुहोस्।
बेड हेड ($ १))
सम्बन्धित: ११ शीर्ष-रेटेड सौंदर्य ग्याजेटहरू
राती स्वस्थ खाना
एउटा केटा र एउटी केटी शयन कक्षमा